Acquiescence anaty rano - Torolàlana ho an'ny zava-bita | Torolàlana momba ny lalao, legiona, zava-bita | WoW Guides | WoW Guides
Acquiescence anaty rano - Torolàlana ho an'ny zava-bita
Sofia Vigo | | Game Guide, Legiona, zava-bita
Salama daholo. Manohy ny fitiavako ny biby fiompy sy ny adin'ny biby fiompy, hanomboka andian-torolàlana aho hanatratrarana ny zava-bita Havana ao amin'ny fianakaviana. Ity zava-bita ity dia misy zava-bita folo hafa izay hotantaraiko ao amin'ny bokin'izy ireo. Androany aho manomboka Fankatoavana anaty rano.
Mahazatra fianakaviana - Acquiescence Aquiescence
Ny zava-bita Havana ao amin'ny fianakaviana Iray amin'ireo zava-bita izay haharitra hatrany amin'ny fanatanterahana azy io.
Raha te hamita azy io dia mila manao zava-bita folo hafa indray isika. Isaky ny zava-bita dia hangataka aminay izy ireo handresy tompony roa ambin'ny folo amin'ireo Nosy Broken ao amin'ny dimy ambin'ny folo izay homenay ary biby tokana avy amin'ny fianakaviana tokana ao amin'ny ekipa no ampiasainay. Biby fiompy, biby, masinina, sidina sns.
Ny olana amin'ity zava-bita ity dia ny fikarohana an'izao tontolo izao momba ny biby telo ihany no hiasa isan'andro. Raha tsara vintana isika, ny sasany dia ampahany amin'ny zava-bita izay hataontsika.
Raha te-hanatanteraka ny ady amin'ity zava-bita ity dia tsy maintsy miantehitra amin'ny fananana tameran'ny zava-bita, miasa isika. Indray mandeha isan'andro ihany no azontsika resena azy, na dia vitantsika amin'ny fanovana ihany koa izany, satria ny zava-bita dia zaraina amin'ny kaonty. Mazava ho azy, tsy maintsy ambaratonga 110 isika ary asandratra ny lazan'ny Legion ka novahana ny iraka.
Rehefa vitanao ny zava-bita rehetra ary azonao ny Havana ao amin'ny fianakaviana hanome antsika antsika izy ireo Hazo nofy ratsy.
Hanomboka ity andiana zava-bita ity amin'ny Fankatoavana anaty rano, izay tsy maintsy hitondrantsika mascots rano iray hiatrika ireo mpampianatra rehetra. Amin'ity toro-lalana ity dia hametraka ny ady amin'ny dimy ambin'ny folo aho, saingy tadidio fa noho ny zava-bita Fankatoavana anaty rano, ilaina ihany ny mandresy ny roa ambin'ny folo. Holazaiko aminao hoe iza amin'ireo no manahirana kokoa mba hahafahanao misafidy izay hatao voalohany. Amin'ny ady sasany dia tsy mila ireo maskotin'ny ekipa telo isika, fa hampiasa azy ireo foana hialana amin'ny faharatsiana lehibe kokoa.
2 Bodhi Sunshaker
3 tompoko galveston
4 Tiffany Nelson
5 Merayl amin'ny alina
6 Bredda Softskin
7 Grixis kely
10 Trapper Jarrum
12 Master Tamer Flummox
14 Voankazo mahery Durian
Ity mpampianatra ity dia hita ao an-tanànan'i Dalaran.
Ny ekipa izay hampiasaintsika amin'ity fivoriana ity dia ho:
Foza Emperora amin'ny fiantraikany, Mavo manavao y Ampinga akorandriaka
Foza amoron-dranomasina amin'ny fiantraikany, Mavo manavao y Ampinga akorandriaka
Pet ny rano ambaratonga 25
Manomboka ny tolona
Raha vantany vao miala izahay dia mampiasa Mavo manavaoavy eo Ampinga akorandriaka, fiantraikany mandritra ny fihodinana roa, indray Mavo manavao, fiantraikany, Ampinga akorandriaka y fiantraikany mandra-pamonoanay ny biby fiompinao.
Raha tena tsy vintana isika ary ny an'ny Foza Emperora maty, ho azontsika ny Foza amoron-dranomasina ary hampiasa izahay fiantraikany mandra-pahafatin'ny biby fiompy miasa.
Ankehitriny dia hiditra ny biby fiompy manaraka ary hampiasaintsika hanohitra izany Ampinga akorandriaka, Mavo manavao mandritra ny fihodinana roa, ary Ela!. Amin'izao fotoana izao dia atakalo ny biby fiompy ary tsy maintsy mampiasa fanafihana simba isika mandra-pipoaky ny foza. Amin'izany fotoana izany dia hampiasa izahay Ampinga akorandriaka hanavao isika. Hampiasa izahay Mavo manavao rehefa tototry ny rano ny biby fiompin'ny fahavalo.
Raha ilaina ny mampiasa ny biby fiompy fahatelo dia hataontsika izany fiantraikany na izay mety fahavoazana mety simba.
Spawn of G'nathus amin'ny Mitelina anao manontolo, mitsoraka y Fahatairana mandringa
Foza Emperora amin'ny ahevaheva, Onja manasitrana y Ampinga akorandriaka
Pet biby rehetra
Hanomboka ny fivoriana amin'ny fampiasana izahay Fahatairana mandringa, Mitelina anao manontolo, mitsoraka izay ho mavitrika boribory roa ary indray Mitelina anao manontolo mandra-pahafatin'ny biby fiompinao.
Hiditra ny biby fiompinao faharoa ary hampiasainay Fahatairana mandringa, mitsoraka izay ho mavitrika fihodinana roa ary Mitelina anao manontolo mandra-pahatongan'ny biby fiompinay Spawn of G'nathus maty.
Avoakanay ny Foza Emperora ary mampiasa izahay Ampinga akorandriaka y ahevaheva mandra-pahafatin'ny biby fiompinao.
Ampidiro ny biby fiompy fahatelo ary hampiasa ny fahaizany voalohany isika Onja manasitrana, avy hatrany avy eo Ampinga akorandriaka hanavao isika. Eo anelanelany no hampiasainay ahevaheva y Onja manasitrana raha hitantsika fa mila manasitrana isika.
Ity master dueling ity dia hita ao an-tanànan'i Dalaran ary fihaonana somary sarotra io.
Spawn of G'nathus amin'ny hampihorohoroiko, mitsoraka y Fahatairana mandringa
Foza akorandriaka amin'ny Grab, Ampinga akorandriaka y Pongo ara-panahy
Fampihorohoroana amin'ny totohondriny, Tahiry voajanahary y mitsoraka
Raha vantany vao manomboka izahay dia hampiasa ny Spawn of G'nathus amin'ny Fahatairana mandringa, hampihorohoroiko, mitsoraka y hampihorohoroiko, mandra-pahafatin'ny biby fiompin'ny mpanohitra antsika.
Hiditra ny biby hafa ary hesorinay ny Foza akorandriaka ary hampiasa izahay Grab, Pongo ara-panahy, Grab indray. Raha tsy maty izy dia hampiasa Ampinga akorandriaka y Grab mandra-pahafatiko azy.
Ampidiro ny biby fiompy fahavalo manaraka dia hampiasainay Grab. Raha ny antsika Foza akorandriaka maty, hivoaka izahay Fampihorohoroana ary hampiasa izahay totohondriny. Raha mbola velona izy dia hanome isika Ela! ary avy eo dia hamoaka ny anay izahay Fampihorohoroana. Hampiasa izahay Tahiry voajanahary, totohondriny, mitsoraka y totohondriny indray hatramin'ny farany.
Raha misy antony dia lasa sarotra ny ady ary mila mampiasa ilay Spawn of G'nathus, hataonay amin'ny fampiasana ny fahaiza-manao izy ireo hampihorohoroiko.
Hydrite amin'ny Manaikitra lalina, Antsoy ny varatra y Fiadiana fiarovana
Spawn of G'nathus amin'ny Mitelina anao manontolo, Ampinga helatra y Fivoahan'ny kotroka
Hivoaka miaraka amin'ny biby fiompinay izahay Hydrite ary hampiasa izahay Fiadiana fiarovana, Antsoy ny varatra y Manaikitra lalina mandra-pahafatin'ny biby fiompy fahavalo.
Ampidiro ny biby mpifaninana faharoa ary hampiasainay izahay Manaikitra lalina, Fiadiana fiarovana y Manaikitra lalina indray mandra-pahafatiny.
Ampidiro ity biby fiompy manaraka ity dia hampiasainay Manaikitra lalina mandra-pahatongan'ny Hydrite maty.
Mivoaka izahay Spawn of G'nathus ary hampiasa izahay Ampinga helatra, Fivoahan'ny kotroka y Mitelina anao manontolo mandra-pamono ny biby mpifaninana ary handresy amin'ny lalao.
Merayl amin'ny alina
Hita any Azsuna ity mpampianatra ity ary ady sarotra izany.
Jumper amin'ny Lela lash, honahona y fefy
Foza akorandriaka amin'ny Grab, fefy y Pongo ara-panahy
Hiaraka amin'ny an'ny Jumper ary hampiasa izahay Lela lash mandritra ny telo fihodinana, avy eo fefy y Lela lash mandra-pamono ilay biby mpifaninana aminy.
Ampidiro ity biby fiompy manaraka ity dia hampiasainay honahona mandra-pitsangan'ny maty ny biby fiompy fahavalo. Mandritra ny fihodinan'ny fanahy dia hamoaka ny biby fiompy faharoa isika.
Ampidiro ny biby fiompin'ny fahavalo hafa dia omenay Ela!. Ho faty ny biby fiompinay ary avy eo hahazoantsika ilay Foza akorandriaka. Ny fahaiza-manao voalohany hampiasaintsika dia Pongo ara-panahy mandritra ny fihodinana roa aorian'izay fefy y Grab mandra-pahafatin'ny biby fiompinay.
Mivoaka izahay Jumper ary mampiasa izahay fefy, honahona y Lela lash mandra-pahatapitry ny tolona.
Ity mpampianatra ity dia hita ao Montealto ary fantatra amin'ny anarana hoe Bredda Cueroliso.
Ny sahona amin'ny ambaratonga 25 miaraka Lela lash, Onja manasitrana y Fivondronan'ny lalitra
Spawn of G'nathus amin'ny hampihorohoroiko, Ampinga helatra y Fahatairana mandringa
Manomboka ny adinay amin'ny sahona izahay ary hampiasa Fivondronan'ny lalitra, Onja manasitrana y Lela lash mandritra ny telo fihodinana. Manohy ny Onja manasitrana y Lela lash mandra-pahavitan'ny biby mpifaninana aminy.
Ampidiro ity biby fiompy manaraka ity dia ampiasainay Fivondronan'ny lalitra y Lela lash mandra-pahafatin'ny biby fiompinay.
Avoakanay ny Jumper ary mampiasa izahay fefy, honahona y Lela lash mandra-pahafatin'ny biby fiompinao.
Ampidiro ny biby fiompy farany. Manome izahay Ela!, honahona y Lela lash mandra-pahafatin'ny biby fiompinay.
Mivoaka izahay Spawn of G'nathus ary mampiasa izahay Ampinga helatra, hampihorohoroiko, Fahatairana mandringa ary indray, hampihorohoroiko.
Raha mandeha tsara ny zava-drehetra dia ho vitantsika tsara ny tolona.
Ity mpampianatra ity dia hita ao Montealto ary fantatra amin'ny anarana hoe Grixis Chiquipum.
Atombohy ny ady ataontsika amin'ny Foza Emperora mampiasa Ampinga akorandriaka, Mavo manavao y fiantraikany mandritra ny telo fihodinana. indray Ampinga akorandriaka, raha ilaina dia manome izahay Ela! ary manohy miaraka izahay Ampinga akorandriaka, Mavo manavao, fiantraikany mandritra ny telo fihodinana, Ampinga akorandriaka, Mavo manavao y fiantraikany mandra-pamonoantsika ilay biby mpifaninana.
Ampidiro ity biby fiompy manaraka ity dia hampiasainay fiantraikany mandritra ny fihodinana roa, Ampinga akorandriaka y fiantraikany mandra-pahafatin'ny biby fiompinay.
Manohy ny tolona amin'ny Spawn of G'nathus ary mampiasa izahay Fahatairana mandringa. Raha ambanin'ny teboka 300 ny biby fiompinay dia mampiasa izahay mitsoraka. Raha ambony isika dia hampiasa Mitelina anao manontolo ary avy eo mitsoraka. indray Mitelina anao manontolo hatramin'ny faran'ny fivoriana.
Ity mpampianatra ity dia hita ao Montealto.
Foza Emperora amin'ny fiantraikany, Mavo manavao y mikoropadropaka anatin'ny
Fehin-kiraro diaphanous amin'ny Waterjet, Orana manadio y Mitombo
Hanomboka ny adinay miaraka isika Foza Emperora, mampiasa fiantraikany mandritra ny telo fihodinana, avy eo mikoropadropaka anatin'ny, Mavo manavao y fiantraikany mandra-pamono ilay biby mpifaninana aminy.
Ampidiro ny biby fiompinao manaraka dia hampiasainay Mavo manavao, fiantraikany mandra-pahafatiko azy ary Ela! Raha ilaina.
Miditra amin'ny tolona ny biby fiompy farany ary ampiasainay fiantraikany, mikoropadropaka anatin'ny, Mavo manavao y fiantraikany mandra-pahafatin'ny biby fiompinay.
Avoakanay ny Fehin-kiraro diaphanous ary mampiasa izahay Mitombo, Orana manadio, Mitombo indray ary Waterjet mandra-pamono ilay biby mpifaninana sy famaranana ny tolona.
Ity mpampianatra ity dia hita any Stormheim ary ady sarotra izany.
Foza Emperora amin'ny ahevaheva, Onja manasitrana y mikoropadropaka anatin'ny
Manomboka ny adinay amin'ny Hydrite ary mampiasa izahay Antsoy ny varatra y Manaikitra lalina. Raha hitantsika fa nilatsaka mihoatra ny 600 ny fiainantsika dia tsara kokoa ny mamerina ny tolona raha tsy te-hampidi-doza ianao raha tsy mahavita azy. Raha tsy izany dia hampiasa izahay Fiadiana fiarovana y Manaikitra lalina mandritra ny telo fihodinana mandra-panafoanao ny biby fiompinao.
Ampidiro ny biby fahavalon'ny fahavalo faharoa ary ampiasao Antsoy ny varatra y Manaikitra lalina mandra-pahafatiko Hydrite. Hamoaka ny Spawn of G'nathus ary mampiasa izahay Mitelina anao manontolo y Fivoahan'ny kotroka mandra-pahavitanao amin'ny biby fiompinao.
Ampidiro ny biby fiompy mifaninana fahatelo dia hampiasainay izahay Ampinga helatra, Fivoahan'ny kotroka y Mitelina anao manontolo mandra-pahafatin'ny biby fiompinay.
Avoakanay ny Foza Emperora ary mampiasa izahay mikoropadropaka anatin'ny, Fanasitranana y ahevaheva mandra-pahatapitry ny tolona.
Araka ny nolazaiko teo aloha, lalao somary sarotra ity. Raha maika isika amin'ny fotoana rehetra, dia tsara kokoa ny mamerina azy io. Saingy apetrako amin'ny safidinao izany.
Ity mpampianatra ity dia hita ao Stormheim.
Hiaraka amin'ny an'ny Foza Emperora ary hampiasa izahay fiantraikany, Zavona famerenana, Ampinga akorandriaka, fiantraikany mandritra ny fihodinana efatra, Mavo manavao, Ampinga akorandriaka y fiantraikany mandra-pananganana ny biby fiompy ary aorian'izay Mavo manavao.
Ampidiro ny biby fiompy fahavalo hafa ary manavao Mavo manavao, manavao isika Ampinga akorandriaka ary mampiasa izahay fiantraikany mandra-pitsangana amin'ny maty. Avy eo izahay mampiasa Ampinga akorandriaka.
Ampidiro ny biby fiompy mifaninana farany ary ampiasao fiantraikany mandra-pahafatiko azy. Raha ilaina dia hampiasa biby fiompy hafa izahay.
Hita any Suramar ity mpampianatra ity ary ady sarotra be io.
Foza Moonshell amin'ny Arcane Slash, Ampinga akorandriaka y Mitomany volana
Spawn of G'nathus amin'ny hampihorohoroiko, mitsoraka y Fivoahan'ny kotroka
Nanomboka ny ady niaraka taminy izahay Foza Moonshell ary mampiasa izahay Ampinga akorandriaka, Mitomany volana y Arcane Slash hamono ny biby fiompinao.
Ampidiro ny biby mpifaninana faharoa ary ampiasao Arcane Slash. Raha maty ny foza, dia hesorinay ny Foza Emperora. Tsy maintsy mitazona ny Ampinga akorandriaka y Mavo manavao, mazoto foana. Eo anelanelany no hampiasainay fiantraikany.
Raha ny antsika Foza Emperora maty, hofaranantsika miaraka amin'ny Spawn of G'nathus.
Hita any Suramar ity mpampianatra ity ary ady sarotra izany.
Gahz'rooki amin'ny Famelezana ekipa, Mitelina anao manontolo y Geyser
Sahona sahady amin'ny Waterjet, honahona y ho be
Spawn of G'nathus amin'ny Mitelina anao manontolo, mitsoraka y Fivoahan'ny kotroka
Hanomboka ity ady ity isika Gahz'rooki ary hampiasa izahay Geyser.
Mamoaka ny anay izahay Sahona sahady ary hampiasa izahay ho be mandra-pahafatin'ny sahona kelinay.
Hamoaka ny Spawn of G'nathus ary hampiasa izahay Fivoahan'ny kotroka y Mitelina anao manontolo mandra-pahafatin'ny biby fiompinay.
Hamoaka indray izahay Gahz'rooki ary hampiasa izahay Mitelina anao manontolo mandra-pahatapitry ny tolona.
Hita any Suramar ity mpampianatra ity.
Hanomboka amin'ny Foza Emperora ary hampiasa izahay Ampinga akorandriaka y Mavo manavao ary hataonay mihetsika hatrany izy ireo. Eo anelanelany no hampiasainay fiantraikany.
Raha ny mahazatra dia tsy afaka manao ady amin'ny foza fotsiny isika, fa raha hitantsika fa midina be ny fiainana dia hampiasa isika Mavo manavao ary biby hafa hamita azy io. Ady lava be izao.
Voankazo mahery Durian
Ity mpampianatra ity dia hita ao amin'ny Val'sharah.
Jumper amin'ny Waterjet, honahona y fefy
Izay sahona misy Waterjet, Onja manasitrana y Oroka oroka
Hanomboka amin'ny Jumper mampiasa Waterjet, honahona, fefy ary indray Waterjet mandra-pamonoanay ny biby fiompinao.
Ampidiro ny biby mpifaninana faharoa ary ampiasao Waterjet mandra-pahafatiko azy.
Ampidiro ny biby fiompy fahavalo fahatelo ary ampiasao fefy, honahona y Waterjet mandra-pahafatin'ny biby fiompinay.
Hamoaka ny biby fiompy faharoa sy ny fampiasana azy izahay Waterjet mandra-pahatapitry ny ady.
Foza akorandriaka amin'ny Claws fanahy, fefy y Pongo ara-panahy
Fehin-kiraro diaphanous amin'ny Waterjet, Onja manasitrana y Mitombo
Manomboka ny adinay amin'ny Spawn of G'nathus ary hampiasa izahay mitsoraka, hampihorohoroiko, Fahatairana mandringa y hampihorohoroiko mandra-pahafatin'ny biby fiompinao.
Ampidiro ny biby mpifaninana faharoa dia omenay Ela!. Amin'izay fotoana izay dia maty ny biby fiompinay ary esorinay ny Foza akorandriaka, izay hampiasainay Claws fanahy, Pongo ara-panahy, fefy ary indray Claws fanahy mandra-pahafatin'ny biby mpifaninana.
Ampidiro ny biby fiompy mifaninana fahatelo dia hampiasainay izahay Pongo ara-panahy y Claws fanahy mandra-pahafatin'ny foza.
Mivoaka izahay Fehin-kiraro diaphanous ary mampiasa izahay Mitombo, Waterjet mandritra ny fihodinana roa ary Mitombo mandra-pahatapitra ny ady.
Rehefa vitantsika ireo ady roa ambin'ny folo ilaina dia haseho antsika ny zava-bita Fankatoavana anaty rano ary hanana fahombiazana kely kokoa isika mba hamitana izany Havana ao amin'ny fianakaviana.
Mandra-pahatongan'ny manaraka ry zalahy. Mandrapihaona amin'ny lahatsoratra manaraka.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: WoW Guides » Game Guide » Acquiescence anaty rano - Torolàlana ho an'ny zava-bita
Nanjavona ny fameperana sidina - Patch 7.3.5
Patch Notes 7.3.5